Doorashada Erdogan dan weyn ayaa ugu Jirta Soomaaliya - Wargeyska Faafiye
Home 2014 September 22 .Warka Doorashada Erdogan dan weyn ayaa ugu Jirta Soomaaliya
Doorashada Erdogan dan weyn ayaa ugu Jirta Soomaaliya
September 22, 2014 · by	Liban Farah ·
Erdogan…marka af Turkiga lagu dhahayo ama Rajab Dayib Erdogan oo afafka kale ay ugu dhawaaqaan waa madaxweynaha hadda ee Jamhuuriyadda Turkiga, waa R/wasaarihii hore ee Turkiga, 2003 ayuu qabtay xilka R/wasaarenimada, isagoo hayay ilaa sanadkan 2014.
Erdogan waxa uu ku dhashay magaalada taariikhiga ah ee Qusdandiiniya oo maanta loo yaqaan Istambuul sanadkii 1954-kii, asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa magaalada Darabzoon, waxa uuna ku soo barbaaray saboolnimo.
Bilowgii kusoo biiriddiisa siyaasadda ayuu u sheegay warbaahinta in uu iibin jiray khudaarta gaar ahaan Batiikh iyo Sisin, taas oo uu sheegay ineey ka dabooli jirtay kharajka tacliinta ee dugsiyadiisii hoose iyo dhexe, waxa uu dhigtay dugsiga Imaam Khaddiib oo ahaa iskuul Diini ah oo lagu barto culuumta Islaamka, kaddibna waxa uu galay kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Marmara.
Waxa uu ku biiray xisbigii Khalaas Al-waddani oo uu guddoominayay Najmu-diin Arbakaan dabayaaqadii todobaatameeyadii, hayeeshee afgambigii meleteriga ee ka dhacay dalka Turkiga 1980-kii ayaa meesha ka saaray xisbiyadii siyaasadda, Sadex sano kadib oo ay xisbiyada siyaasaddu ku soo laabteen Turkiga ayuu noqday Ergogan xubin aad u firfircoon oo ka mid ah xisbiga Rafaah, isaga oo olole weyn uga sameeyay xisbigaas magaalada Istambuul.
Doorashooyinkii 1994-tii ayaa xisbigaasi Rafaah u sharaxay in uu Ordogan noqdo duqa magaalada Istambuul, si fiican ayuu ugu guuleeystay doorashadaas.
Afar sano kadib 1998-dii ayuu aas aasay xisbiga caddaaladda iyo horumarka, ha yeeshee waxaa lagu eedeeyay inuu sameeyay kicin, isnaceeyb iyo kala tag, isaga oo adeegsanaya Diin, taasoo sababtay in xabsiga la dhigo, islamarkaana laga mamnuuco inuu qabto xil dowladeed, waxa uu xilligaas ku jiray ololihii doorashooyinka guud ee dalkaasi Turkiga, waxaa lagu qabsaday inuu dhowr Beyt oo ka tirsan gabay Turki ah ka hor aqriyay dadweynaha.
Waxa uu iska difaacay dhammaan eedeeymihii loo soo jeediyay, isaga oo xiriirkii aragtiyeed ee kala dhaxeeyay saaxiibadiisa siyaasadda ee u janjeeray dhanka Islaamka isku dayay inuu u difaaco hab aan siyaasadda kala saaridda diinta iyo siyaasadda ama cilmaaniyadda an si toos ah uga hor imaaneeyn.
Taageerayaasha cilmaaniyadda ayaa u adeegsaday warbaahinta, iyaga oo ku dhaliilaya in uu hirgelinayo aragtida dhisidda jamhuuriyad muslim ah oo la yiraahdo Turki, taasoo ku soo jeedisay indho badan oo an siyaasaddaas la dhacsaneyn.
Mucaaradkii ka horjeeday ayaa ka sameeyay dacaayad aheyd inuu doonayo inuu u dhaqmo sida Faladamiir Butinka Ruuska, Selfio Berleskooniga Italy marna noqday madaxweyne marna R/wasaare.
Xisbiga caddaalada iyo nabadda ayaa ka qeybgalay doorashooyinka golaha shacabka ee 2002-dii ka dhacay Turkiga, iyada oo xisbigu helay 363 kursi, taas oo ka dhigneyd guul ka yaabisay dadkii ka soo horjeeday.
Guushaasi waxeey horseedday in uu madaxweyne noqdo C/llahi Gool oo isna inta burriyay xukunkii ku dhacay Ordogan islamarkaana xeerkii lagu ciqaabay meesha ka saaray uu u magacaabay xilka R/wasaarenimada jamhuuriyadda Turkiga.
Ordegan waxa uu horseeday in dalka Turkiga uu helo xasillooni siyaasadeen, mid dhaqaale iyo mid bulsho, waxa uu heshiisiiyay dowladaha Jusuurabeeniya iyo Adrebijaan, isaga oo sidaas oo kalena caawiyay dowladihii yar yaraa ee Midowga Sofiyeetka, waxa uu la sameeystay heshiis iyo iskaashi dowladaha Ciraaq iyo Siiriya, isaga oo furfuray siyaasadda Turkiga ee xiriirka caalamiga ah oo aheyd mid hooseeysa, taasoo horseedday in magaalada Istambuul ay noqoto magaalo ay ka muuqdaan dhaqamo kala duwan.
Waxa uu furay xadka ay Kurdiyiinta la wadaagaan Turkiga oo furiddiisu mid nidaam ahaan mamnuuc aheyd, isaga oo sidaasi oo kale ogolaaday in lagu qudbeeyn karo afka Kurdiyiinta.
Waxa uu noqday nin adadag oo mararka qaarkood qaata go’aan ay ku dhiciddiisu ku adagtay madaxda sidiisa oo kale ah.
2009 waxa uu ka baxay shirkii Daarfuur kadib markii ay isaga iyo Shiimon Beres ay isku afdhaafeen dagaalki Gaza ka dhacay sanadkaas, waxa uu sheegay in madaxweynaha Israa’iil loo ogolaaday in uu hadlo 25 daqiiqo ha yeeshe isaga iyo Camar Musa oo ahaa xoghayaha Jaamacadda Carabta xilligaa la siiyay 12 daqiiqo kaliya.
28 Augst 2014-kii ayaa loo caleema saaray in uu noqdo madaxweynaha 12-aad ee jamhuuriyadda Turkiga kadib doorashooyinki madaxtinimada ee Turkiga.
Raceb Tayyib Ordogan waxa uu 2011-kii booqasho ku yimid magaalada Muqdisho, isaga iyo xaaskiisa Aamina, waxa ay si lama filaan ah ugu soo jeedisay arintaas indhaha dunida xaaladdii adkeyd ee sanadkaas ka jirtay Muqdisho, isaga oo xukuumaddiisa weydiistay in Soomaaliya loo diro kaalmo bani’aaddanimo iyo caawinaad siyaasadeed, kadibna waxa uu horseeday in adduunka intiisa kalena uu wax uun ka qabto gaajadii ba’neyd ee xilligaas ka taagneyd koofurta Soomaaliya.
Ugu dambeyntii Kanu Tran Danjirihii hore ee Turkiga u joogay Soomaaliya ayaan horraantii sanadkan kula kulmay xafiiskiisa Muqdisho, waxa uuna ii sheegay in xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga uusan billaaban 2011-kii ee uu soo billowday 1520-kii oo ah ku dhawaad 500 oo sano ka hor, xilligaas oo dowladdii Cusmaaniyiintu ay hub iyo sahay usoo dirtay Axmed Ibaahim “Axmed Gureey” oo la dagaalamayay maamulkii xilligaas ee Itoobiya oo gacan iyo taageero ka helayay dowladda Bortaqiiska, waxa uu salka ku hayay halgan ay Bortaqiiska iyo Itoobiyaba ugu jireen sidi ay u qabsan lahaayeen xeebaha bariga Afrika ee Soomaaliya.
Sidaasi si la mid ah Soomaaliya waxa ay taageero hiil iyo hoo ahba ka sugeysaa madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga, Rajeb Dayib Ordegan, waxa ayna dadka Soomaaliyeed aad ugu hanweeynyihiin in uu sii laba laabo kaalmooyinka horumarineed ee dadka Soomaaliyeed uu siiyo iyo waliba dib u dhiska dalka, iyaga oo tayeeynaya dhismaha ciidamada XDS, Turkiga ayaa ah hadda dowladda siisa Soomaaliya dhaqaalaha ugu badan ee lagu tayeeyo ciidanka qaranka Soomaaliya, taas oo la filayo mar dhow ineey hormuud ka noqoto helidda ciidan qaran oo leh awood ay ku bedeli karaan ciidamada shisheeye ee haatan dalka ku sugan.
Xildhibaano mar kale la diiday.
Askar ka tirsan DF oo rasaaseeyay gaari
Bay iyo Bakool: Degmooyin cusub
"Habeenkii iftiinka nabada"